DHAGEYSO: Xaliimo Yarey: oo qurba joogta u sheegtay Beentii Ugu Weyneed? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA DHAGEYSO: Xaliimo Yarey: oo qurba joogta u sheegtay Beentii Ugu Weyneed?
DHAGEYSO: Xaliimo Yarey: oo qurba joogta u sheegtay Beentii Ugu Weyneed?
Guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in doorasho qof iyo cod ah lagu qaban karo dhulka aysan Kooxda Al-shabaab gacanta kuheyn.
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyinka Xaliimo ismaaciil (Xaliimo Yarey) oo hadal u jeedisay Soomalida Magaaladda Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in sanadka 2020-ka ay doorashada shacabka intiisa baddan ay ka qeyb qaadaan doonaan.
Waxa ay sheegtay in daraasado la sameeyay lagu ogaaday in Al-shabaab aysan haysanin dhulal baddan oo ku yaala koonfurta dalka Soomaliya, islaamrkaana taasi ay cadeynayso in doorashadda qof iyo cod lagu qaban karo magaalooyinka Goboladda dalka Soomaliya.
“Magaalooyin baddan oo ku yaala Koonfur Galbeed Soomaliya, Hir-shabeelle, Jubba-land, Puntland iyo Galmudug ayaa safaro ku tagay meelaha ay Al-shabaab gacanta ku hayaan waa goobo cayiman, taasi waxay cadeyn u tahay in Soomaliya sanadka 2020-ka lagu qaban doono doorashada qof iyo cod”, ayay tiri Xaliimo Yarey.
Sidoo kale Gudoomiyaha Guddiga Xaliimo ismaaciil (Xaliimo Yarey) ayaa sheegtay in dalal badan oo caalamka oo amnigooda uu liito ay ka dhacaan doorashada qof iyo cod.
Waxaa xusid mudan in aysan suurta geli karin doorasho qof iyo cod ilaa inta laga sifeeynayo Kooxda Al shabaab oo aan laga xureyn Koonfurta Soomaaliya, oo waliba goobaha Dowladda Fedaraalka ka Arrimiso sida Magaalada Muqdisho ka qaata lacago canshuur ah sidoo kalane dadka si weyn ugu baqaaan.
dhanka kale doorasho qof iyo cod waxaay ku xiran tahay wada hadal lala galo Maamulka Soomaliland oo sheegtay in aay tahay Dowlad Madax banaan.
MAHAAN KA DHAGAYSO BEENTA XALIIMO YAREEY